Raveloaritiana Mamisoa · Mey 2022 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Mey, 2022
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Mey, 2022
Afrika Mainty 20 Mey 2022
Miraikitra ao anatin'ny folihala ara-pitsarana amin'ny lalàm-pifidianana izay mametra ny fametraham-pialana tsy misy hatak'andro sy ny lalàmpanorenana milaza fa afaka miandry ireo minisitry ny kabinetra Nizeriana mirotsaka hofidiana.
Azia Atsimo 18 Mey 2022
Novaina sy naverina navoaka indray taorian'ny adihevitra mafana ny hira Nepaley iray ao amin'ny YouTube, mampiseho ny fahorian'ireo mpiasa ambony Maoista izay nanohana sy niady tamin'ny fikomiana naharitra folo taona tao Nepal.
Azia Atsinanana 17 Mey 2022
Nidina ambany ny laharan'i Hong Kong noho ny fampiharana ny lalàna momba ny fiarovam-pirenena sy ny fanenjehana ireo mpanao gazety.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 10 Mey 2022
Sary zanabolana Sarintanin'i Okraina, ahitana sary avy amin'ny zanabolana, sary tamin'ny drôna, ary sary 3D manaramaso, mandaminana ary manamarina ny fahasimban'i Okraina.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 05 Mey 2022